Polyester bodofotsy, ambony seza lafika, polyester Bathrobe - Longdian
ambony seza lafika
ivelan'ny trano lanezy
Luxury Travel lanezy
Coral volon'ondry bodofotsy Amin'ny Bag
Cheap volon'ondry bodofotsy In ampahany
Season rehetra Outdoor Travel tantera-drano bodofotsy
2 sosona bodofotsy
Shaoxing Longdian Textile Co., Ltd. dia indostria sy ara-barotra orinasa, miorina ao Shina Textile City-KeQiao Town, Shaoxing, Sina. Company dia naorina teo an 2002, voasoratra anarana dia 1.000.000 CNY renivohitra, izay tena mamokatra sy ny fanondranana lamba volon'ondry, volon'ondry bodofotsy, bathrobe, fitsangatsanganana bodofotsy, lamba sy ny sisa. Rehetra ny vokatra dia manaraka ny fenitra iraisam-pirenena sy ny tena toetra sarobidy isan-karazany samy hafa manerana izao tontolo izao tsena.
Mividy ny volon'ondry lanezy
Ny dingana voalohany amin'ny fividianana lehibe volon'ondry bodofotsy no mahalala ny fomba sy Izay ho ampiasaina. Mazava ho azy, lamba firakotra, ary dia zavatra maro azo ampiasaina na aiza na aiza saika, fa ny marina mahazo ny haben'ny sy ny karazana bodofotsy ho an'ny fampiasana natao dia azo antoka ianao afa-po amin'ny fividianana. Manontania tena ny ...
Monja dia fantatra amin'ny maha-iray amin'ireo softest, nafana indrindra.- lamba eny an-tsena. Snuggling ao amin'ny volon'ondry bodofotsy amin'ny alina mangatsiaka dia afaka manao ny zava-drehetra hahatsapa tsara kokoa. Ny fahafantarana bebe kokoa momba ny fomba ny fitaovana natao hanampy anao hanao safidy tsara kokoa ianao rehefa any an-tsena ho Cozy volon'ondry mitora ...
Adiresy: RM4028-RM4038, North Zone Fito, China Textile City, KeQiao Town, Shaoxing City, Sina
Polar Blanket Fabric, Bonded Fleece Fabric, Fabric , Rpet Fabric,